Uvavanyo oluzenzekelayo lovavanyo oluzenzekelayo
Eyona Oomatshini Abazihambelayo Uvavanyo oluqhelekileyo lokuZenzekelayo
Kweli nqaku, siza kuvavanya ezinye zeyona mibuzo ixhaphakileyo yovavanyo oluzenzekelayo kunye nendlela ethintela ngayo imibutho ukuba iphumelele kuvavanyo oluzenzekelayo.
Akukho nzima ukucinga ngezibonelelo zokuvavanywa okuzenzekelayo ecaleni kophuhliso lwemveliso-ukukhutshwa ngokukhawuleza, ukwanda kovavanyo, ukwenziwa kovavanyo rhoqo, ingxelo ekhawulezileyo kwiqela lophuhliso, ukubiza nje ezimbalwa, ukanti imibutho emininzi ayikenzi ntshukumo okanye ukumelana notyalo mali kovavanyo oluzenzekelayo.
Ngokunokwenzeka eyona nto inzima kwaye icelomngeni kuyo nayiphi na inzame yovavanyo oluzenzekelayo kukuqonda ukusikelwa umda kovavanyo oluzenzekelayo kunye nokumisela iinjongo ezizizo kunye nokulindelweyo ukuthintela ukuphoxeka. Unoko engqondweni, makhe sibone ezinye zezona zinto zixhaphakileyo kunye neentsomi malunga novavanyo oluzenzekelayo:
Uvavanyo oluzenzekelayo lungcono kunokuvavanywa ngesandla
Ukubhekisa kwiposti yebhlog kaMichael Bolton Ukuvavanya vs. Ukujonga , uvavanyo oluzenzekelayo aluvavanyi ngokwenene. Kukujonga iinyani. Xa sinokuqonda kwenkqubo, sinokunyanzelisa oko kuqonda kwiifom zokutshekisha kwaye emva koko sisebenzise iitshekhi ezizenzekelayo, siqinisekisa ukuqonda kwethu. Ukuvavanya, kwelinye icala, ngumsebenzi wophando apho sijolise ekufumaneni ulwazi olutsha malunga nenkqubo ephantsi kovavanyo ngokuhlola.
Ukuvavanywa kufuna ukuba umntu enze isigqibo esifanelekileyo ekusebenzeni kwenkqubo. Sinokubona iziphene xa besingalindelanga. Akufuneki sithambekele komnye okanye komnye, njengoko zombini ezi ndlela zifunekayo ukufumana ukuqonda kumgangatho wesicelo.
Ukufikelela kuvavanyo oluzenzekelayo lwe-100%
Njengokuba kungekho ndlela isebenzayo yokufezekisa i-100% yokuvavanywa kovavanyo (ngenxa yeemvume ezingapheliyo), kuyafana nokusebenza kovavanyo oluzenzekelayo. Singalonyusa ukogquma uvavanyo ngokuqhuba iimvavanyo ezizenzekelayo ngedatha engaphezulu, ukumiselwa okungaphezulu, okugubungela uluhlu lweenkqubo ezisebenzayo, izikhangeli, kodwa ukufezekisa i-100% iseyinjongo engekho ngqiqweni. Xa kufikwa kuvavanyo oluzenzekelayo, iimvavanyo ezingakumbi azithethi ukuba zibubunjani obungcono okanye ukuzithemba okungcono. Konke kuxhomekeke kwindlela oluyilwe ngayo uvavanyo. Endaweni yokujolisa kukugubungela ngokupheleleyo endaweni yoko, jolisa kweyona ndawo ibalulekileyo yokusebenza ebaluleke kakhulu kwishishini.
Xa usenza isisombululo sovavanyo oluzenzekelayo, kukho ezinye izinto ezinxulumene nophuhliso ngaphandle nje kokubhala amatyala ovavanyo. Ngokwesiqhelo isikhokelo kufuneka siphuhliswe esinokuxhasa imisebenzi ye-bespoke ethi iluncedo kwaye inentsingiselo kwishishini, njengokukhetha imeko yamatyala, ukunika ingxelo, ukuqhutywa kwedatha, njl.
Ukuphuhliswa kwesakhelo yiprojekthi eyedwa kwaye kufuna abaphuhlisi abanezakhono kwaye kuthatha ixesha ukwakha. Nokuba isikhokelo esisebenza ngokukuko sikhona, ukubhala okwenziwa ngokuzenzekelayo kutshekisha kuthatha ixesha elide kunokwenza uvavanyo olufanayo ngesandla. Ke ngoko xa sifuna ingxelo ekhawulezayo kwinqaku elitsha elisandula ukuphuhliswa, ukujonga ngesandla kuhlala kukhawuleza kunokuzenzekelayo kuvavanyo. Nangona kunjalo, i-ROI ibuyiswa ekuhambeni kwexesha xa sifuna ukwenza iimvavanyo ezifanayo rhoqo.
Inqanaba eliphezulu lokuchongwa kwesiphene ngokujonga ngokuzenzekelayo
Nangona uninzi lwezisombululo zovavanyo oluzenzekelayo ezithengiswa ngumthengisi zinobunkunkqele kwaye zikwazi kakhulu ukwenza imisebenzi enzima, ngekhe zikwazi ukukhuphisana nobukrelekrele bomvavanyi ongumntu onokubona ukungahambi kakuhle kwisicelo ngelixa uphonononga okanye ukwenza iseti yovavanyo olubhaliweyo ngokuchasene nenkqubo yovavanyo. Ngelishwa, abantu balindele uvavanyo oluzenzekelayo ukufumana uninzi lweebugs ngenxa yesityholo sokwanda kovavanyo, kodwa enyanisweni, akunjalo.
Kuyinyani, iimvavanyo ezizenzekelayo zilungile ekubambeni imiba yokuhlehla- emva kokuba inqaku elitsha longeziwe kwisiseko sekhowudi esele ikho, kufuneka siqinisekise ukuba asikophulanga ukusebenza ngoku kwaye siyayidinga olo lwazi ngokukhawuleza- kodwa, inani lemicimbi yokuhlehla, Kwiimeko ezininzi, ithande ukuba ngaphantsi kakhulu kunokwenziwa komsebenzi omtsha ophuhliswayo.
Elinye inqaku ekufuneka likhunjulwe kukuba iitshekhi ezizenzekelayo zijonga kuphela izinto ezilungiselelwe ukuba zijongwe ngumntu obhale iskripthi. Izikripthi zilungile njengomntu owazibhalayo. Zonke iitshekhi ezizenzekelayo zinokudlula ngovuyo kodwa iimpazamo ezinkulu zinokungaqwalaselwa ezinokunika umbono ongeyonyani ngomgangatho wemveliso. Eyona nto ibalulekileyo, ukukhangela kunokungqina ubukho beziphene, kodwa akunakubungqina ukungabikho kwazo.
Sifuna kuphela ukuZenzekelayo koVavanyo lweCandelo
Ke, ukuba ukubakho kokufumana iziphene kukhulu kuvavanyo lweempawu ezintsha, kutheni le nto singazisebenzisi iimvavanyo zethu ezizenzekelayo ngokuchasene nokusebenza okutsha njengoko kuphuhliswa? Ewe, le yimeko yamaqela aziqheliselayo I-TDD .
Abaphuhlisi babhala uvavanyo lweyunithi kuqala, bayijonge ngokungaphumeleli kwaye emva koko babhale ikhowudi eyaneleyo yokufumana uvavanyo lweyunithi kwaye umjikelo uyaphindaphindwa kude kusebenze ukusebenza okucetywayo. Eyona nto ibalulekileyo, oluvavanyo lweyunithi oluzenzekelayo lujonga ukusebenza okutsha kwaye ekuhambeni kwexesha benza iphakheji yokuhlengahlengiswa kweyunithi ephinda-phindwayo njengoko kusenziwa umsebenzi omtsha.
Kodwa, kukho umqolomba koku. Ngelixa i-TDD ikhuthazwa kakhulu kwaye iyindlela eyomeleleyo yophuhliso ekwakhiweni komgangatho ukusuka kumabala anyukayo, iimvavanyo zeyunithi zilungile kuphela ekufumaneni iimpazamo zenkqubo, hayi ukusilela. Kukho imeko enkulu ngakumbi yovavanyo eyenzekayo xa onke amacandelo ebotshiwe kwaye enza inkqubo.
Ngapha koko, imibutho emininzi uninzi lwazo lujonga ngokuzenzekelayo kumatshini we-UI wenkqubo. Nangona kunjalo, ukubhala okwenziwa ngokuzenzekelayo kwe-UI okanye kwenkqubo, ngelixa izinto zisaphuhliswa ngowona msebenzi ungoyikiyo, njengoko ukusebenza okutsha kuthanda ukungazinzi (kuxhomekeke kutshintsho oluninzi) ngexesha lophuhliso. Kananjalo ukusebenza okulindelweyo kusenokungaziwa kude kube mva, ke ukuchitha ixesha ukwenza utshintsho olusebenzayo akukhuthazwa.
Sifuna ukuZenzekelayo kwe-UI yokuZenzekelayo
Kukho amaxabiso ekusebenzeni kweetsheki ezenzekelayo kwi-UI nakwinqanaba lenkqubo. Sibona oko amava omsebenzisi xa enxibelelana nesicelo; Singavavanya ukuhamba kokuphela kokuphela kunye no-3rdukudityaniswa kweqela xa singakwazanga kuvavanya ngenye indlela; Singabonisa iimvavanyo kubathengi nakubasebenzisi bokugqibela ukuze bafumane ukuziva ngokugubungela uvavanyo. Nangona kunjalo, ukuxhomekeka kuphela kwiitsheki ezenzekelayo kumaleko we-UI kuneengxaki zawo.
I-UI ihlala itshintsha ukuphucula uyilo olubonakalayo kunye nokusebenziseka kwaye ukukhangela ngokuzenzekelayo ukusilela ngenxa yotshintsho lwe-UI kwaye hayi utshintsho ekusebenzeni kunokunika umbono ongeyonyani wombuso wesicelo.
Ukutshekishwa kwe-UI okuzenzekelayo kukwacotha kakhulu kwisantya sokuphunyezwa kunakwiyunithi okanye ungqimba lwe-API kwaye ngenxa yoku, impendulo yenginginya kwiqela iyacotha. Kungathatha iiyure ezimbalwa ngaphambi kokuba isiphene sibonakale kwaye sixelwe kubaphuhlisi. Kwaye xa kukho into ehamba gwenxa, ingcambu yohlalutyo lwesizathu ithatha ixesha elide kuba ayibonakali lula ukuba ikuphi ibug.
Ukuqonda umxholo wovavanyo ngalunye kunye nokuba luvavanyo olwenziweyo kufuneka luzenzekelayo kubalulekile. Uvavanyo oluzenzekelayo kufuneka lube yinxalenye yomsebenzi wophuhliso, ke iqela liphela linoxanduva lovavanyo oluzenzekelayo, kunye nabaphuhlisi ababhala besenza iimvavanyo zeyunithi, abaPhuhlisi beSoftware ekubhaleni uVavanyo besenza kwaye begcina iimvavanyo zokwamkelwa kwi-API kunye / okanye kwi-UI.
Ukuphulukana nokholo kunye nokuthembela kovavanyo lokuzenzekelayo
Le yokugqibela ayisiyontsomi malunga novavanyo oluzenzekelayo, kodwa iziphumo ebezingalindelekanga xa uvavanyo oluzenzekelayo luhamba gwenxa. Uchitha iiyure ezininzi usenza isisombululo esifanelekileyo sovavanyo, usebenzisa ezona zixhobo zilungileyo kunye neendlela ezilungileyo, kodwa ukuba ukukhangela okuzenzekelayo akulincedi iqela akunantsingiselo.
Ukuba iqela alinakho ukubonakala okanye ulwazi malunga nezinto ezizenzekelayo kunye nokwenza, banokukhulula ngokoyika okungaziwayo okanye baphinde iinzame zabo zokuvavanya kwakhona. Ukuba iitshekhi ezenzekelayo zizinto ezingenamsebenzi, ezicothayo, zinike iziphumo ezithi emva koko zinokudida iqela ngaphezulu kokubonelela ngomnatha wokhuseleko kunye nokuqinisa ukuzithemba.
Musa ukoyika ukususa iitsheki ezizenzekelayo ezihlala zisilela okanye zinika iziphumo ezingahambelaniyo. Endaweni yoko, jolisa kwisuti ecocekileyo nethembekileyo yovavanyo olunokunika izikhombisi ezichanekileyo zempilo yesicelo.
Uvavanyo oluzenzekelayo lutyalomali lwexesha elide. Kuya kuthatha ixesha kunye nobuchwephesha ekuphuhliseni nasekugcinweni kwezakhelo zovavanyo oluzenzekelayo kunye nezikripthi ezizenzekelayo. Uvavanyo oluzenzekelayo ayingomzamo omnye apho usisa khona isisombululo kwaye usiyeke siqhubeke. Ifuna ukubeka iliso rhoqo kunye nokuhlaziywa.
Endaweni yokujolisa endaweni ye-QAs yesandla okanye silindele ukuba kutshekishwe ngokuzenzekelayo ukuba kufumaneke iziphene ezininzi, endaweni yoko kufuneka samkele izibonelelo ezizisa kwiqela, njengokukhulula ixesha le-QA kuvavanyo lokuhlola ngakumbi apho amathuba okuveza iziphene andisiweyo, okanye ukusebenzisa i-automated izikripthi zokwenza idatha yovavanyo enokusetyenziselwa ukuvavanywa ngesandla.
Ukuqonda ukusikelwa umda kunye nokuseta ulindelo lokwenyani kubalulekile ekoyiseni ezi ntsomi zovavanyo oluzenzekelayo.
dlulisa idatha ukusuka kwi-pixel ukuya kwi-pixel
s8 + vs inqaku 5
I-Samsung Galaxy Qaphela indaleko: Nantsi indlela ekutshintshe ngayo kule minyaka idlulileyo
I-AT & T Galaxy S5 kunye ne-S5 Active ekugqibeleni bafumana uhlaziyo lwe-Android Marshmallow
Eyona tshaja ye-Qi engenazingcingo ye-iPhone 8